Ingaba ikati yam iyagula? - Zithini iimpawu zokuyifumana? | IBezzia
USusana godoy | 13/10/2021 16:00 | Mascotas
Sisoloko sisithi izilwanyana zasekhaya azinakuthetha kwaye sinyanisile. Kuba ukongeza kwinkampani abasibonelela ngayo kunye nempendulo yabo kwisikhuthazo, kubonakala ngathi sibazi kakuhle. Ewe kunjalo, kukho isihloko esisoloko sikhumbula: Ndingazi njani ukuba ikati yam iyagula?
Ngamanye amaxesha sinokubona imiqondiso ecacileyo kodwa oku akusoloko kunjalo. Ke siba nexhala ngakumbi kunokuba liyimfuneko. Ke, namhlanje sikushiya nemikhondo oza kuqala ngayo krokra ukuba ikhona into eyenzekayo Kananjalo, kuya kufuneka uye kugqirha wezilwanyana ngokukhawuleza ukuze ususe amathandabuzo akho ngokupheleleyo.
1 Utshintsho kumnqweno wakho wokutya
2 Utshintsho kwiindlela zakho zokuziphatha
3 Ukulala ngaphezu kwesiqhelo
4 Iinwele zakho azinako ukukhanya
5 Iintsini zimhlophe ngaphezu kwepinki
6 Ukudinwa ngequbuliso kunokubonisa ukuba ikati yam iyagula
Utshintsho kumnqweno wakho wokutya
Olunye lweempawu ezicacileyo zokuba ikhona into eyenzekayo. Akunyanzelekanga ukuba sibeke izandla entloko, kuba mhlawumbi yinto yethutyana, kodwa iyinyani yokuba luvavanyo olucacileyo. Yiyo loo nto, ukuba siyayibona indlela anciphisa ngayo umzimba kwaye ihamba kunye nokugabha, asinanto sinokuyenza. Ewe kunjalo, ngamanye amaxesha, utshintsho lunikwa zitye ngaphezu kwesiqhelo kuzo kwaye sinokuthetha malunga nokuphazamiseka kwamathumbu okanye isifo seswekile.
Utshintsho kwiindlela zakho zokuziphatha
Njengoko usazi kakuhle, iikati zizilwanyana zomkhwa. Baneendlela zabo kwaye kunzima kakhulu ukuba bazitshintshe. Yiyo loo nto, xa uqaphela ukuba oku kuyenzeka kwaye abaqhubeki nento abebeyenza, lixesha lokuba ubuze ukuba ikati yam iyagula na. Umzekelo, zicocekile kakhulu kodwa ukuba uqaphela ukuba ayicocwanga njengakuqala okanye mhlawumbi, iya kwelinye icala kwaye ukucoca kwayo kugqithisile, iya kuthi isinike umkhondo wokuba ikhona into eyenzekayo.
Ukulala ngaphezu kwesiqhelo
Mhlawumbi okwangoku kunzima ukwazi ukuba ikati yam iyagula, kuba balala, balala iiyure ezininzi. Kodwa ukuba uqaphela ukuba uchitha ixesha elininzi kuneliqhelekileyo evalwe ngamehlo, ukuba uyaqaphela ukuba uzama ukuzifihla okanye uvuka engenankathalo, kukho into engalunganga. Kwakhona sikhankanya utshintsho kwindlela aziphethe ngayo, notshintsho. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba uzibeke kwizandla zobuchwephesha ukuze ubonisane nayo.
Iinwele zakho azinako ukukhanya
Sithanda ukubona indlela iinwele zakhe ezikhupha ngayo ngaphandle kokukhanya. Kuba iyafana nempilo kunye nobuhle. Kodwa ngamanye amaxesha ayifani kwaye sibona icala elichaseneyo. Oko kukuthi, siya kuqaphela ukuba ukukhanya kukhanya kulahlekile ukongeza koku ngamanye amaxesha siyakuyibona ibambekile. Ke ngoko, apho siza kuqala sikrokre ukuba kukho into eyenzekayo. Kwisandle esinye, Ewe inokuba inxulumene nesifo esithile, kodwa kwesinye inokubangelwa kukutya. Oko kukuthi, isilwanyana sidinga amaxabiso esondlo angawenziyo.
Iintsini zimhlophe ngaphezu kwepinki
Kuyinyani ukuba Iintsini zithande ukuba pinki, le ikwalatha kwisiseko sempilo. Kodwa ngamanye amaxesha siyabona ukuba umbala omhlophe uyavela kubo. Ke, yenye yeempawu ezicacileyo zokuba kukho isifo esisichaphazelayo. Enye yazo yi-anemia, kodwa kuyinyani ukuba zinokubakho ezinye izizathu ezahlukeneyo. Ukuba yi-anemia, iya kuhamba kunye nobuthathaka okanye ukudinwa ukongeza ekudambiseni umzimba kunye nokwehla kobunzima. Ukuphelisa amathandabuzo kusoloko kuyacetyiswa ukuba ubonane nogqirha wezilwanyana.
Ukudinwa ngequbuliso kunokubonisa ukuba ikati yam iyagula
Kuyinyani ukuba banokuba sele benamavila. Kodwa xa kuziwa ekudlaleni, banika konke. Yiyo loo nto ukuba uqaphela utshintsho olukhulu, phantse ngequbuliso, kusenokwenzeka ukuba iyasilumkisa ngento engemva kwayo. Ukuba akafuni kudlala, ukuba akanalo uluhlu, unokuba nolunye uhlobo lwengxaki yokuphefumla. Nangona singenakugxila kuphawu olunye kwaye kungabikho kwisigqibo esinye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Mascotas » Ndingazi njani ukuba ikati yam iyagula?